NGO နှင့် INGO မျက်နှာဖုံးအောက်မှာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Environment » NGO နှင့် INGO မျက်နှာဖုံးအောက်မှာ
NGO နှင့် INGO မျက်နှာဖုံးအောက်မှာ
Posted by zanhtet on Jul 2, 2010 in Environment | 13 comments
ကျွန်တော်ကို သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က လာပြောတယ်။ ငါ NGO မှာအလုပ်ရတယ်တဲ့။ ၀မ်းသာအာရနဲ့ပေါ့။ NGO မှာအလုပ်ရတာကို ပျော်နေတဲ့သူ ၀မ်းသာနေတဲ့သူ ဂုဏ်ယူနေတဲ့သူ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံမှာ ဘယ်နှစ်ယောက် ရှိသလဲ ဆိုတာကိုပြန်တွေးကြည့်မိတယ်။ တကယ်တော့ NGO ဆိုတာအမည်ခံသတောင်းစားပါပဲ။ သူတို့က သူတောင်းစားကို ခေါင်းပုံဖြတ်တဲ့သူမျိုးတွေ။ NGO ဆိုပြီးလာလုပ်နေတဲ့ သူတွေကို ကြည့်ပါ။ သူတို့နိုင်ငံမှာ တိုက်ခန်း ကျဉ်းကျဉ်းလေးကို နေရတဲ့ သူမျိုးတွေ။ တချို့ဆိုအလုပ်အကိုင်မရှိသူတွေ။ အဲဒီိလိုလူတွေက ဒီနိုင်ငံမှာ အင်းယားလိုလူကုံထံတွေနေတဲ့နေရာမှာ တစ်လကို ဒေါ်လာ ၂၀၀၀ တန်တွေ ငှား ကားကောင်းစားတွေကို ကယ်ဆယ်ရေးအမည်ခံ ၀ယ်ယူသုံးစွဲ လစာကြီးကြီးတွေယူ ပြီးတော့ Office Staff လောက်အရည်အချင်းရှိသူတွေကို တစ်လ ဒေါ်လာ ၂၀၀ လောက်ပေး။ တစ်ကယ်တော့ဒီငွေတွေဟာ နိုင်ငံတကာက အလူရှင်တွေက ပေးတဲ့ငွေတွေမဟုတ်ဘူးလား။ တစ်ချို့ဆို တစ်နှစ်တစ်ခါ ငွေပေါင်းမြောက်များစွာ အကုန်အကျခံပြီး အပန်းဖြည် ခရီးဆိုပြီး သွားတယ်။ တစ်ချို့ကတော့ပေါ်တင်ပဲ ပျော်ပွဲစားထွက်တယ်တဲ့။ တစ်ကယ်တော့ ဒီငွေတွေဟာဒုက္ခသည်တွေကို မှိခိုပြီး မျောက်ပြဆန်တောင်း ဆင်ဖြူတော်မှီ ကြံစုပ်လို့ရလာတဲ့ ငွေတွေမဟုတ်ဘူးလား။ အဲဒီလို NGO တွေနဲ့ ဝေစားမျှစားလုပ်နေတဲ့ ၀န်ထမ်းအမည့်ခံတွေက ဂုဏ်ယူကြတယ်။ တကယ်တော့ အဲဒီသူတွေဟာ သူများတွေ စားလို့ကျန်တဲ့ အရိုး ပေါ်က အသားတွေကို စားရလို့ ကျေနပ်နေသူတွေပါ။ တကယ်စဉ်းစားကြည့်ကြပါ။ လိုအပ်နေတဲ့ ဒုက္ခသည်တွေအပေါ် အကူအညီငွေကြေးတွေ ဘယ်လောက်များရလဲလို့။ ရလာတဲ့ငွေကို သူတို့ အလွဲသုံးစားလုပ်တာနဲ့ တကဲ့ရောက်တဲ့ငွေကြေး အစစ်အမှန်ဟာ ၄၀% လောက်ပဲရှိပါတယ်။ နောက်ပြီး NGO တွေရှိလို့ ဒုက္ခသည်ဘယ်လောက်များ အစဉ်ပြေလို့လဲ။ နောက်ဆုံးတော့ သူတောင်းစားတွေပဲဖြစ်ကျန်ခဲ့တာမဟုတ်လား။ တကယ်အကူအညီ လိုနေတဲ့ နယ်စပ်ကဒုက္ခသည်တွေ ရွာလုံးကျွတ်သတ်ခံရတဲ့သူတွေ စစ်အစိုးရရဲ့ လူအခွင့်ရေးချိုးဖောက် ခံရပြီး ပြားပြား ၀ပ်နေတဲ့ နယ်စပ်က ဒုက္ခသည်တွေ ကိုဘာများကူညီနိုင်လို့လဲ။ လူမြင်ကောင်းရုံ နံမည်ကြီး ဒုက္ခသည် စခန်းတွေကို(နာဂစ်လိုနေရာမျိုး) တွေကို လှူပြပြီး နောက်တစ်ခေါ အလှူခံလို့ကောင်းရုံ လုပ်ရပ်ကလွဲပြိး ဘာများလုပ်နိုင်လို့လဲ။ နယ်စပ်မှာ ရွာလုံးကျွတ် ဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေ ရွာကလွဲ ပြီးဘယ်မှမသွားတက်လို့ သောင်းကျန်းသူ နအဖ တို့ကနှိပ်စက်သမျှတွေ ကိုခံနေရတဲ့သူတွေကို ဘာများလုပ်ပေးနိုင်လို့လဲ။နယ်စပ်မှာတင်မဟုတ်ပါဘူး ရန်ကုန်မှာလည်း ဒုက္ခရောက် နေသူတွေအများကြီးပါ။ ဘာအပြစ်မှမရှိပဲ အင်းစိန်ထောင်မှာ လူအခွင့်အရးချိုးဖောက်ပြီး ဒုက္ခရောက်နေသူတွေ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု လိုနေတဲ့သူတွေကို ဘာအကူအညီပေးနိုင်လို့လဲ။ ပေးရင်လဲ နအဖမျက်နာညိုပြီး ပြည်တော်ပြန်ရမှာစိုးလို့ ရေရှည်မစားရမှာကြောက်ပြီး လှစ်လှူရှူနေကြသည်။ တစ်ချို့က ဘာသာရေးကို ခုတုံးလုပ်ပြီး NGO လုပ်နေကြတယ်။ ခရစ်ယာန် ဘာသာဝင်တွေက အများဆုံးပါ။ ဘယ်လိုပဲလုပ်လုပ် အဲဒီ NGO စေတနာဝန်ထမ်းဆိုသူတွေကို အပိုအခွင့်အရေးတွေမယူပဲ ရသင့်ရထိုက်တဲ့ လစာကိုယူပြီး အခုလိုလုပ်နိုင်မလားလို့ပြောရင် NGO ၁၀၀ မှာ ၉၉ ယောက်လောက် ကအလုပ်ထွက်ပါလိမ့်မယ်။NGO တွေကို မကောင်းမြင်လို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ NGO မှာအလုပ်လုပ်ပြီး ကိုယ်လူမျိုးအခြင်းခြင်း နိမ့်ချပြီးမြင်နေရတာတွေကို စိတ်မကောင်းဖြစ်လွန်းလို့ပါ။ တစ်ချို့ NGO က၀န်ထမ်းတွေဟာ ချပေးတဲ့ငွေတွေကို အလွဲသုံးစားလုပ်ပစ်ပြီး ငွေပိုတင်တာတွေဟာ ဒုက္ခသည်တွေကို စော်ကားတာပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ NGO တွေကြောင့် ဘယ်လောက်များတိုးတက်သွားသလဲ။ ဘယ်လောက်များ ဒုက္ခသည်တွေအဆင်ပြေသွားလဲ။ လူမှုအဆင့်အတန်းနိမ့်ကျနေတာ အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်နေတာတွေ ကိုဘယ်လောက်များ မြင့်တင်ပေးနိုင်လို့လဲ။ အဲဒီအခြေခံ အဆင့်တွေကို မမြင့်တင်ပဲ ဆေးမှီးတိုနဲ့ ကုဖို့ကြိုးစားနေ တာဟာဘယ်လောက်များထိရောက်မှာလဲ။ နိုင်ငံခြားကငွေတွေကို လိမ်ယူတာ ကိုယ့်နိုင်ငံကိုယ်လူမျိုး ဘယ်လောက် သိက္ခာကျလဲဆိုတာထည့်မစဉ်းစားပဲ လက်တလောငွေလေးမျိုးမျိုးမြတ်မြတ်ရတာလောက်နဲ့ ကျေနပ်နေတဲ့ သူတွေကို သိအောင်ပြောပြတာပါ။ တကယ်အစစ်အမှန် NGO တွေလဲရှိသလို NGO အမည်ခံသူတောင်းစားတွေလဲအများသား။ အစစ်နဲ့အတုမှာ အတုကများနေသလိုပါပဲ။ NGO တွေရဲ့ မျက်နှာဖုံးအောက်က မျက်နှာကို တွေ့နိုင်ပါစေ။ (မှတ်ချက် ဒီအာဘော်မှာ စာရေးသူ၏အာဘော်သာဖြစ်ပါသည်။ လွပ်လပ်စွာကွဲလွဲခွင့်ရှိပါသည်။ ဒီစာမှာ ရေးသမျှ အကြောင်းအရာ တွေစာရေးသူတာဝန်ယူပါသသည်။) http://staymedia-fire.blogspot.com/2010/05/ngo-ingo.html တွင်မှုရင်းပါ။
Nyunt Zanhtet has written2post in this Website..
I think Programming is over the world
View all posts by zanhtet →
NGO တွေ ဒီလို့ လုပ်တာ ခုမှာပဲ သိရပါတယ် အဲ့လို့ မျောက်ပြ ဆန်တောင်းတာ အောက်တန်းကျတဲ့လုပ်ရပ်ပါ ကိုယ်လူမျိုးတွေအပေါ် အဲ့လို့ မလုပ်သင့်ပါဘူ တကယ်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေ ကို စာနသင့်ပါတယ် ကိုယ်ကောင်းစားဖို့တခုတည်းနဲ့ နောက်ဘ၀တွေမှာ ပြန်ခံရမှာပါ… ဒါဆို ပြည်တွင်းက NGO တွေ အကုန်လုံး လိမ်ညာနေတဲ့ အဖွဲ့တွေ ပဲလား အရင်က အထင်ကြီးသမျှ ခုမှာ သိရပါတယ် ဆောင်းပါးရေးတဲ့ သူကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဒီထက်ပို ပြီး သူတို့ ဖြတ်စားတဲ့ လုပ်ရပ်တွေကို ပိုပြီး ဖော်ပြပေးရင် အရမ်းကောင်းပါတယ် ဒါမှာ သူတို့ လိမ်နေတာ ပြည်သူတွေ သိမှာပါ.။..
ွိုThanks for this news.
ခင်ဗျား မြင်သလောက် သိသလောက်.. ကျဉ်းမြောင်းတဲ့ အမြင်လေးနဲ့ပြောရင်တော့… ဖြစ်နိုင်ပါတယ်.. ခင်ဗျား NGO ဘယ်နှခုကို သေသေချာချာလေ့လာဖူးလဲ… ၄၀% ပဲရောက်တယ်လို့ ခင်ဗျားကိုဘယ်သူကပြောလဲ… စစ်အစိုးရဘက်ကရော.. လွတ်လပ်စွာလုပ်ပိုင်ခွင့်တွေပေးထားလို့လား…. NGO တွေဟာ စစ်အစိုးရရဲ့ တင်းကျပ်တဲ့စည်းကမ်း တွေအောက်မှာ လှုပ်ရှားပေးနေရတာပါ… နာဂစ်ဖြစ်တုန်းက NGO တွေကထိရောက်အကူအညီတွေအများကြီးပေးနိုင်ခဲ့တယ်… လူသူအရောက်အပေါက်နည်းတဲ့ ရွာတွေ.. ပြည်တွင်း ကူညီသူတွေတောင်မသိတဲ့ချောင်ကြိုချောင်ချား နေရာတွေအထိေ၇ာက်အောင်သွားကူညီခဲ့တယ်… နောက်ပြီး လုပ်ကိုင်ပုံ နည်းစနစ်.. ပြည်တွင်းကသူတွေက လှူမယ် ဆိုရင် လှူမယ်ဟေ့.. သွားဟေ့.. ဒါပဲသိတယ်… အဲ့ဒီနေရာမှာ အိမ်ထောင်စုဘယ်နှစုရှိတယ်.. ကလေးဘယ်ယောက်.. လူကြီးဘယ်နှယောက်.. စတဲ့ တိကျတဲ့အချက်အလက်တွေ မကောက်ယူနိုင်တဲ့အားနည်းချက်တွေရှိတယ်… စေတနာနဲ့ကူညီပေမယ့် ထိရောက်မှုမရှိဘူး… ခင်ဗျားပြောသလို နယ်စပ်ကိုသွားပြီး ကူညီဖို့ဆိုတာ နိုင်ငံခြားသားတွေပါတဲ့ INGO တွေမပြောနဲ့ ပြည်တွင်း Local NGO တွေတောင်မလုပ်နိုင်တဲ့ကိစ္စပါ… နောက်ပြီး အလှူငွေဆိုတာ ပေးချင်တိုင်းပေးလို့ ရချင်တိုင်းရတာမဟုတ်ပါဘူး အလှူရှင်တွေကလဲ စိတ်ချရတဲ့ NGO တွေကိုပဲပေးတာပါ… ကိုယ့်အဖွဲ့အစည်းကတော့ ဘာတွေလုပ်မယ် ဘယ်ကာလအတွင်းမှာ အပြီးလုပ်မယ် ဘယ်သူတွေအတွက်အဓိကထားလုပ်မယ် ဆိုပြီးစာတင်ရပါတယ်… အဲ့ဒီတော့မှ သူတို့ကချပေးတာပါ နောက်ပြီးတော့ လှူပြီးရင် ပြီးသွားတာမဟုတ်ပါဘူး.. အလှူငွေပေးတဲ့ သူတွေဆီကို ပြန်ပြီး Report တင်ရပါတယ်… တစ်ခါတစ်ရံ သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်း.. လုပ်နေဆဲမှာရော လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာရော လာကြည့်တက်ပါတယ်…. ဒါတွေကို ခင်ဗျားမသိဘူးနဲ့တူတယ်… ကျွန်တော် NGO တွေဘက်ကလိုက်ပြောပေးနေလို့ ကျွန်တော့်ကို NGO မှာလုပ်နေတယ်လို့မထင်ပါနဲ့ ကျွန်တော် မလုပ်ပါဘူး.. လုပ်လဲမလုပ်ဖူးပါဘူး… ဒါပေမယ့် လူမှုရေးလုပ်ငန်းလုပ်တာကို ဝါသနာပါလို့လေ့လာထားလို့သိရတာပါ.. ခင်ဗျားပြောသလိုလုပ်နေတဲ့ NGO တွေလဲရှိမှာပါ.. ဒါကတော့ သူတို့သမိုင်းနဲ့သူတို့ပဲ… နောက်ပြီး နအဖ ကလဲ NGO တွေကို သိပ်မကြည်ပါဘူး.. ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေကတဆင့် ဒီနိုင်ငံက ဒုက္ခသည်တွေ ဘယ်လိုရှိနေတယ်ဆိုတာ နိုင်ငံတကာကို ပေါက်ကြားသွားမှာစိုးလို့ပဲ… ကျွန်တော့်စိတ်ထင် ခင်ဗျားလဲ နအဖ ရဲ့လူတစ်ယောက်ပဲထင်တယ်…
[ခင်ဗျား မြင်သလောက် သိသလောက်.. ကျဉ်းမြောင်းတဲ့ အမြင်လေးနဲ့ပြောရင်တော့… ဖြစ်နိုင်ပါတယ်.. ခင်ဗျား NGO ဘယ်နှခုကို သေသေချာချာလေ့လာဖူးလဲ… ၄၀% ပဲရောက်တယ်လို့ ခင်ဗျားကိုဘယ်သူကပြောလဲ]
ကျွန်တော်မြင်သလောက် သေးငယ်တဲ့အမြင်ဖြစ်ပါစေအုံး.. ကို zuugyi နံမည်ကြီးဖြစ်ရပ်တွေဖြစ်တဲ့ AIM တို့ Malteser ဆို့အကြောင်းကြားပြီးပြီလား အဲဒါဆိုရင် အဲဒီဖြစ်ရပ်တွေကို လိုက်လေ့လာပါအုံးလို့ပြောပြချင်ပါတယ်…
[စစ်အစိုးရဘက်ကရော.. လွတ်လပ်စွာလုပ်ပိုင်ခွင့်တွေပေးထားလို့လား…. NGO တွေဟာ စစ်အစိုးရရဲ့ တင်းကျပ်တဲ့စည်းကမ်း တွေအောက်မှာ လှုပ်ရှားပေးနေရတာပါ… ]
နအဖဟာ နိုင်ငံရေးကိုလုပ်တဲ့ အသင်းအဖွဲ့ကလွဲလို့ ကျန်တဲ့လုပ်ရပ်အဖွဲ့အစည်းတွေကို နိုင်ငံေ၇းလုပ်ရပါကလွဲလို့ အကုန်ခွင့်ပြုထားပါတယ် မယုံရင် ရန်ကုန်မှာတင် Private Team ပေါင်း ၄ သောင်းကျော်ရှိပါတယ် ကို zuugyi လေ့လာကြည့်ပါအုံး…
[နာဂစ်ဖြစ်တုန်းက NGO တွေကထိရောက်အကူအညီတွေအများကြီးပေးနိုင်ခဲ့တယ်… လူသူအရောက်အပေါက်နည်းတဲ့ ရွာတွေ.. ပြည်တွင်း ကူညီသူတွေတောင်မသိတဲ့ချောင်ကြိုချောင်ချား နေရာတွေအထိေ၇ာက်အောင်သွားကူညီခဲ့တယ်… ]
နာဂစ်ဖြစ်တုန်းက(NGO အကုန်လုံးကို မဆိုလိုပါ) NGO တွေသာတစ်ကယ်တော်မယ်ဆိုရင် ဧရာဝတီတိုင်းမှာ လူပေါင်း ၂၀၀၀၀၀ ကျော်လောက်သေစရာအကြောင်းမရှိပါဘူး သေတဲ့သူကသေမှ ကယ်ဆယ်ရေးဆင်းတာဟာ သူခိုးပြေးမှထိုးကွင်းထတာပါ…..
[နောက်ပြီး လုပ်ကိုင်ပုံ နည်းစနစ်.. ပြည်တွင်းကသူတွေက လှူမယ် ဆိုရင် လှူမယ်ဟေ့.. သွားဟေ့.. ဒါပဲသိတယ်… အဲ့ဒီနေရာမှာ အိမ်ထောင်စုဘယ်နှစုရှိတယ်.. ကလေးဘယ်ယောက်.. လူကြီးဘယ်နှယောက်.. စတဲ့ တိကျတဲ့အချက်အလက်တွေ မကောက်ယူနိုင်တဲ့အားနည်းချက်တွေရှိတယ်… စေတနာနဲ့ကူညီပေမယ့် ထိရောက်မှုမရှိဘူး…]
ကို zuugyi ပြောတဲ့အထဲမှာ ဒီတစ်ချက်တော့ ခံပြင်းပါတယ်.. ဘာလို့လဲဆိုတော့ ပြည်ပကလူဦးစီးမှကောင်းတာလား NGO ဦးစီးမှကောင်းတာလား လုပ်ပုံနည်းစနစ်မကျပေမယ့် လာလှူတဲ့အထဲမှာ ဘယ်သူတွေကိုအကျေနပ်ဆုံးလည်းလို့ ဒုက္ခသည်တွေမေးရင် စေတနာရှင်တွေလို့ပြောပါလိမ့်မယ် NGO ကလူတော်တော်များများ (တော်တော်များများဆိုတဲ့ စကားကို မမေ့ပါနဲ့) ပိုက်ဆံယူတဲ့ ၀န်ထမ်းပါ တာဝန်အရလုပ်တာပါ.. ဒါသူတို့အလုပ်ပါ.. ဒါပေမယ့် မြို့မှာထိုင်နေရင်ရရဲ့သားနဲ့ အလုပ်ပျက်ခံ ငွေကုန်ခံပြီး ရွာတွေထိဆင်းလာတာအလကားမှတ်လို့လားဗျာ.. လာလှူတဲ့သူတွေဟာ ဘယ်သူမဆို အစွန်ဆုံးတွေ အရောက်နည်းတယ်ဆိုပြီးသွားသွားနေလို့ ရွာနီးကလူတွေမရတော့တာကို ကြားရလား… တာဝန်အရလုပ်တဲ့သူနဲ့ စေတနာရှင်နဲ့နိုင်ယှဉ်ရင် စနစ်ကျချင်မှ ကျမယ် စေတနာရှင်ရပ်လုပ်ရပ်က အပြက်အသက်သာတာ ကိုယ်တိုင်ဆင်းကြည့်ပါအုံး အွန်လိုင်းပေါ်ကကြီးပဲ မဝေဖန်ပါနဲ့….
[နောက်ပြီး အလှူငွေဆိုတာ ပေးချင်တိုင်းပေးလို့ ရချင်တိုင်းရတာမဟုတ်ပါဘူး အလှူရှင်တွေကလဲ စိတ်ချရတဲ့ NGO တွေကိုပဲပေးတာပါ… ကိုယ့်အဖွဲ့အစည်းကတော့ ဘာတွေလုပ်မယ် ဘယ်ကာလအတွင်းမှာ အပြီးလုပ်မယ် ဘယ်သူတွေအတွက်အဓိကထားလုပ်မယ် ဆိုပြီးစာတင်ရပါတယ်… အဲ့ဒီတော့မှ သူတို့ကချပေးတာပါ နောက်ပြီးတော့ လှူပြီးရင် ပြီးသွားတာမဟုတ်ပါဘူး.. အလှူငွေပေးတဲ့ သူတွေဆီကို ပြန်ပြီး Report တင်ရပါတယ်… တစ်ခါတစ်ရံ သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်း.. လုပ်နေဆဲမှာရော လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာရော လာကြည့်တက်ပါတယ်…. ဒါတွေကို ခင်ဗျားမသိဘူးနဲ့တူတယ်]
အလှူရှင်တွေက သူတို့ငွေကြေးကို ဘယ်လောက်နဲ့တန်ဖိုးဖြတ်တာလည်း နယ်တွေမှာ အိမ်တစ်လုံးကို ငါးသိန်းနဲ့ဆောက်ပေးမယ်ဆိုပြီး သောင်းဂဏန်းလောက်ပဲတန်တဲ့ ခနော်နီခနော်နဲ့ အိမ်တွေဆောက်ပေးသွားတာ မြင်ဖူးလား…. နာဂစ်ဆေးဆိုပြီး NGO တွေ ထုတ်ရောင်းတာတွေ့ဖူးလား အလှူရှင်တွေကတော့ နာဂစ်ဒုက္ခသည်တွေဆီရောက်သွားပြီထင်တဲ့ ထမင်းလုပ်တွေ လုစားခံရတာတွေ ကြားဖူးလာ… လေ့လာကြည့်ပါအုံး… NGO တွေပြောပြတာပဲ နားထောင်မနေပဲ ဒုက္ခသည်တွေစကားနားထောင်ပါအုံး…..
[ခင်ဗျားပြောသလို နယ်စပ်ကိုသွားပြီး ကူညီဖို့ဆိုတာ နိုင်ငံခြားသားတွေပါတဲ့ INGO တွေမပြောနဲ့ ပြည်တွင်း Local NGO တွေတောင်မလုပ်နိုင်တဲ့ကိစ္စပါ…]
[ကျွန်တော် NGO တွေဘက်ကလိုက်ပြောပေးနေလို့ ကျွန်တော့်ကို NGO မှာလုပ်နေတယ်လို့မထင်ပါနဲ့ ကျွန်တော် မလုပ်ပါဘူး.. လုပ်လဲမလုပ်ဖူးပါဘူး… ဒါပေမယ့် လူမှုရေးလုပ်ငန်းလုပ်တာကို ဝါသနာပါလို့လေ့လာထားလို့သိရတာပါ..]
NGO မှာမလုပ်ပဲ NGO တွေအကြောင်းသိလှချီလားဗျ အဲဒါဆို ဒုက္ခသည်တွေကိုလည်းလေ့လာပါအုံး NGO လုပ်ထုံးလုပ်နည်းလေ့လာပြီး ဒုက္ခသည်တွေကိုကြတော့ ဘာလို့မလေ့လာတာလည်း ဒုက္ခသည်တွေလေ့လာရင် ပိုက်ဆံမရလို့လား… လူမှုရေးဆိုတာ NGO လုပ်မှမဟုတ်ပါဘူး.. ကူညီမှုဆိုင်ရာမှန်သမျှဟာလူမှုရေးပါလို့ မြန်မာ အဘိဓာန်မှာ ဖွင့်ဆိုပါတယ်.. NGO လို့ မဖွင့်ဆိုပါဘူး…
[ခင်ဗျားပြောသလိုလုပ်နေတဲ့ NGO တွေလဲရှိမှာပါ.. ဒါကတော့ သူတို့သမိုင်းနဲ့သူတို့ပဲ…]
ဟုတ်ပါတယ်.. ကောင်းတဲ့ NGO တွေအများကြီးပါ ကျွန်တော်အကြံပြုထားတာ သူတို့တွေကို ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ်ရပ်တည်အောင် လုပ်ပေးဖို့ပါ ဟင်းစားမပေးပဲ ကွန်ချက်ပြဖို့ပါ ကြာရင် သတောင်းစားတွေဖြစ်ကုန်မှာစိုးလို့ပါ….
[နောက်ပြီး နအဖ ကလဲ NGO တွေကို သိပ်မကြည်ပါဘူး.. ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေကတဆင့် ဒီနိုင်ငံက ဒုက္ခသည်တွေ ဘယ်လိုရှိနေတယ်ဆိုတာ နိုင်ငံတကာကို ပေါက်ကြားသွားမှာစိုးလို့ပဲ…]
နအဖက NGO တွေရှိတာပိုကြိုက်ပါတယ်… ဘာလို့လဲဆိုတော့ နိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ဒုက္ခသည်ကိစ္စတွေကို ခေါင်းရှုပ်ခံပြီးဖြေရှင်းပေးစရာ မလိုတာရယ်.. နိုင်ငံတော် budget ကိုအိပ်ထဲထည့်လို့ရတာရယ်ကြောင့်လေ
[ကျွန်တော့်စိတ်ထင် ခင်ဗျားလဲ နအဖ ရဲ့လူတစ်ယောက်ပဲထင်တယ်…]
ကို zuugyi တံဆိပ်ကပ် ၀ါသနာပါတယ်ထင်တယ်… ကျွန်တော်နဲ့ လူချင်းလည်းမတွေ့ဖူးဘူး စာလည်း ဒီတစ်ခုထဲဖတ်ပြီး နအဖလူလို့ဘာလို့ တံဆိပ်ကပ်တာလည်း ကိုယ့်မကြိုက်တဲ့သူကို ပွဲဆူအောင်လုပ်သလိုပါပဲ လူထုစိန်ဝင်းရေးတဲ့ တံဆိပ်ကပ်နိုင်ငံရေးကို တစ်ချက်လောက် ဖတ်ကြည့်ပါအုံး… ညွန်းပေးတာပါ.. စာကိုသေသေချာချာဖတ်ပါ နအဖ မကောင်းကြောင်းပဲရေးထားတာပါ ဒါပေမယ့်နိုင်ငံရေးမဟုတ်တဲ့အတွက် နအဖကိုသိပ်ပြီး မပြောထားတာပါ… ခုပြောနေတာလူမှုရေးပါ….. NGO အဓိကပြောထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် NGO ကိုရေးတာပါ စာဖတ်သူကို မျက်စိလယ်အောင်မလုပ်ပါနဲ့
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကို zuugyi ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဆန့်ကျင်ဘက်အမြင်ကိုပေးတဲ့အတွက် ကျွန်တော်အဆိုးမြင်နေလားလို့ ပြန်စမ်းစစ်လို့ရလို့ပါ.. ကို zuugyi ရဲ့ comment ကိုလည်း vote up ပေးထားလိုက်ပါတယ်….များများဝေဖန်ပါ ကြိုဆိုပါတယ်..
zuugyi ပြောတာလည်းမှန်တာပဲ ။ ဘာခံစားချက်နဲ့ ဒါတွေရေးလည်းတော့နားမလည်နိုင်အောင်ပဲ ။ NGO တိုင်းကတော့ဒါမျိုးမဟုတ်ပါဘူး တစ်ခုစ ၊ နှစ်ခုစတော့ရှိကောင်းရှိမှာပေါ့ ။ ဒါပေမဲ့လည်း သူတို့တွေရှိနေလို့ နည်းနည်းအဆင်ပြေနေတာမဟုတ်ဘူးလား ။ လွတ်လပ်စွားဥပဒေဘောင်အတွင်းကလုပ်ကိုင်ခွင့်ပေးလိုက်ပါလား ။ အနည်းနဲ့ အများတော့အဆင်ပြေမှာပဲ ။ NGO တွေသာရောက်မလာခဲ့ရင် ဒီမှာ ဘယ်သူကများ ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်စားပြီး ကြီးတော်နွားကျောင်းပေးပါ့မလဲ ။ etone ကလည်း NGO နဲ့ဘာပတ်သတ်မှမှမရှိဘူး ။ နအဖနဲ့လည်း အဆက်ဆံမရှိဘူး ။ ကြားနေလူတယောက်ရဲ့စိတ်ရင်းအတိုင်းရေးလိုက်တာ ။ မှတ်ချက်မှာရေးတဲ့လွတ်လပ်စွာကွဲလွဲခွင့်ရှိပါသည်ဆိုလို့ မတူတဲ့အမြင်ကိုရေးလိုက်တာ။
zuugyi ပြောတာလည်းမှန်တာပဲ ။ ဘာခံစားချက်နဲ့ ဒါတွေရေးလည်းတော့နားမလည်နိုင်အောင်ပဲ ။ NGO တိုင်းကတော့ဒါမျိုးမဟုတ်ပါဘူး တစ်ခုစ ၊ နှစ်ခုစတော့ရှိကောင်းရှိမှာပေါ့ ။ ဒါပေမဲ့လည်း သူတို့တွေရှိနေလို့ နည်းနည်းအဆင်ပြေနေတာမဟုတ်ဘူးလား ။ လွတ်လပ်စွာဥပဒေဘောင်အတွင်းကလုပ်ကိုင်ခွင့်ပေးလိုက်ပါလား ။ အနည်းနဲ့ အများတော့အဆင်ပြေမှာပဲ ။ NGO တွေသာရောက်မလာခဲ့ရင် ဒီမှာ ဘယ်သူကများ ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်စားပြီး ကြီးတော်နွားကျောင်းပေးပါ့မလဲ ။ etone ကလည်း NGO နဲ့ဘာပတ်သတ်မှမှမရှိဘူး ။ နအဖနဲ့လည်း အဆက်ဆံမရှိဘူး ။ ကြားနေလူတယောက်ရဲ့စိတ်ရင်းအတိုင်းရေးလိုက်တာ ။ မှတ်ချက်မှာရေးတဲ့လွတ်လပ်စွာကွဲလွဲခွင့်ရှိပါသည်ဆိုလို့ မတူတဲ့အမြင်ကိုရေးလိုက်တာ။
non-governmental organization (NGO) နဲ့ NPO, Non-Profit Organization ဆိုပြီးရှိတာမှာ..NGOက အစိုးရမဟုတ်တဲ့အဖွဲ့ ဖြစ်ပြီး အကျိုးအမြတ်ယူချင်ယူမယ်ဆိုတဲ့ အဓိပါယ် ပါနေပါတယ်။
NPOကတော့ခေါင်းစဉ်အရကို အကျိုးအမြတ်မယူပါဘူးဆိုပြီး ဖြစ်နေတဲ့အပြင် ဖွဲ့စည်းပုံမှာလည်းထည့်ရေးထားရပါတယ်။
ဒါတွေနဲ့ပါတ်သက်ပြီး ဆရာလူထုဦးစိန်ဝင်း ဆောင်းပါးတပုဒ်ရေးဖူးတယ်။ အဲဒါလေး ပြန်ရှာနိုင်ရင်ကောင်းမယ်။
နောက်ပြီး ယောဟန်အောင် ကပြန်ချေပရေးဖူးတယ်။ ယောဟန်အောင်က မြန်မာပြည်က စာရေးဆရာ။ ကဗျာဆ၇ာဖြစ်ပြီး အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ဟားဗတ်တက္ကသိုလ်ကနေ ဘွဲ့ရထားသူပါ။ သူက ယိုးဒယားမှာ အနေများပါတယ်။
ပြန်ချေတာလေးတွေလည်း စိတ်ဝင်စရာကောင်းပါတယ်။ ဘယ်မှာသွားရှာရမှန်းမသိလို့ တွေ့ရင် လင့်ခ်လေး ပေးကြစေချင်ပါတယ်။
တော်တော်တော့ ကြာနေပါပြီ။ အနည်းဆုံး ၂နှစ်၃နှစ်ပါပဲ။
NGO အကြောင်းက အင်မတန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလှပါတယ်။ ဆွေးနွေးတော့မယ်ဆိုရင် အနည်းဆုံးတော့ ၀ိကီမှာ ဖတ်ကြည့်ကြပါဦးလို့ အကြံပေးပါရစေ။
ဒါကတော့ နအဖ ရဲ့အပြောပဲရှိတယ်လေ… တကယ်တမ်းလိုက်ပြီးကန့်သတ်နေတာတွေအများကြီးပဲ.. တခြားမကြည့်နဲ့ ဒလဘက်မှာရေသွားလှူတဲ့ ပြည်တွင်းစေတနာရှင်တွေ ကြုံခဲ့ရတာတွေ ကို zanhtet သိလား… နအဖ ရဲ့အပြောနဲ့အလုပ်တစ်ခြားစီလုပ်တက်တာ ကို zanhtet လဲသိမှာပါ..
နအဖ ဘက်က နိုင်ငံတကာ ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကို အချိန်မှီ ဝင်ခွင့်ပြုခဲ့လို့လား… တကယ်ဝင်လာတော့ရော.. ဧရာဝတီတိုင်းဘက်သွားဖို့အရေးကို ဟိုလူ့ကိုစာတင်ရ ဒီဌာနကိုပိုက်ဆံပေးရနဲ့ ခွင့်ပြုချက်ရမှသွားရတာပါ ဒါတွေအတွက်ကုန်တာလဲမနည်းပါဘူး…
ခံပြင်းလဲမတက်နိုင်ဘူး… ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် စေတနာရှင်အဖွဲ့နဲ့လိုက်ဖူးတယ် အဲ့ဒီမှာ လိုအပ်ချက်တွေ.. တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အချိတ်အဆက်လွဲတာတွေ ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အများကြီးပဲ အဲ့ဒါတွေကြုံခဲ့ရတယ်.. Long Term အတွက်ကတော့ NGO တွေကပဲဆက်လက်လုပ်နေရတာပါ… NGO ကဝန်ထမ်းတွေက ပိုက်ဆံယူတယ်ဆိုတာ.. သူတို့က ရည်ရှည်လုပ်ရမှာလေ ဘယ်သူက ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်စားပြီး အကြာကြီးလုပ်ပေးနိုင်မှာလဲ… ဒီနေ့တစ်နေ့တည်းလာလှူ နောက်တော့ပြန်သွား.. လှူပြီးပြီးသွားတာပဲဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဖူး…
ဒါဆို နိုင်ငံတကာကယ်ဆယ်ေ၇းအဖွဲ့ပစ္စည်းတွေကို လေယာဉ်ပေါ်ကချချခြင်းမှာ မင်္ဂလာဒုံဈေးထဲရောက်သွားအောင် ဘယ်သူတွေလုပ်သလဲ.. ဒီမှာအိမ်ဆောင်မယ်ဆိုရင် သစ်ကို ဘယ်သူ့ဆီကပဲဝယ်ရမယ်ဆိုတဲ့ကန့်သတ်ချက်ကရော ဘာလို့ထွက်လာရတာလဲ… ဆန်ကိုလဲဘယ်သူ့ဆီကပဲဝယ်ရမယ်.. ဒါတွေက ဘယ်သူတွေထုတ်တဲ့အမိန့်တွေလဲ… မလိုအပ်ပဲ ပိုက်ဆံတွေကို ပေးပေးနေ၇တာလဲနည်းတာမဟုတ်ဖူး… ဒုက္ခသည်တွေဆီက ထမင်းလုပ်တွေကို လုစားနေတာ ဘယ်သူတွေလဲဆိုတာ လူတိုင်းသိတယ်….
လုပ်ခွင့်ရသလောက် လုပ်ပေးနိုင်သလောက်တော့လုပ်ပေးနေတာပဲ… အခုဘူးသီးတောင် မောင်းတော ဘက်ကမြေပြိုမှု ဖြစ်ဖြစ်ခြင်းမှာ ဘယ် NGO ကိုများ အစိုးရကသွားခွင့်ပေးခဲ့လို့လဲ… ပြည်တွင်း စေတနာရှင်တွေရော သွားခွင့်ရလို့လား…
နောက်ပြီး ဘာသာရေးကိုခုတုံးလုပ်ပြီးလုပ်နေတဲ့ NGO တွေရှိတယ်ဆိုတာ လက်ခံတယ်.. ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လဲ အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေကို သဘောမကျပါဘူး… တော်တော်များများကလဲမကြိုက်ကြပါဘူး…
ကို zanhtet စာထဲကဟာကို ပြောချင်တယ်…
ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ NGO တွေကြောင့် ဘယ်လောက်များတိုးတက်သွားသလဲ။ ဘယ်လောက်များ ဒုက္ခသည်တွေအဆင်ပြေသွားလဲ။ လူမှုအဆင့်အတန်းနိမ့်ကျနေတာ အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်နေတာတွေ ကိုဘယ်လောက်များ မြင့်တင်ပေးနိုင်လို့လဲ။
ဒီနေရာမှာပြောချင်တာကတော့ ဒုက္ခသည်တွေဘက်က သူတို့ရဲ့စိတ်ဓါတ်တွေကိုပြင်ဖို့လိုတယ်… ဥပမာတစ်ခုပြောရရင် စေတနာရှင်တွေ NGO တွေကနေ အိမ်သုံးပစ္စည်းတွေပေးတယ် နောက်တစ်နေ့ ပေါင်ပစ်ပြီး ဖဲရိုက် ကြက်တိုက် ချဲထိုး.. လုပ်ပစ်လိုက်တဲ့သူတွေ နည်းတာမဟုတ်ဖူး… ဒီလိုလူမျိုးတွေကို ဘယ်လိုတိုးတက်အောင်လုပ်ပေးရမလဲ ဘယ်လိုအဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးရမလဲ… ဒါတွေကို အကျိုးရှိရှိအသုံးချပြီး အခြေတည်အောင်ကြိုးစားသွားတဲ့ မိသားစုတွေလဲအများကြီပဲရှိပါတယ်…
NGO မှာလုပ်တယ်ဆိုတာ နှလုံးသားပါမှလုပ်ရတာအဆင်ပြေတာပါ.. ဒါပေမယ့် နှလုံးသားမပါပဲလုပ်နေတဲ့သူတွေလဲရှိပါတယ်…
ဒီလို လူတွေကြောင့်လဲ NGO တွေနာမည်ပျက်နေရတာပါ… အဓိက ကတော့ စိတ်ဓါတ်တွေပြင်ကြဖို့ပဲ…
မတူညီတဲ့အမြင်တွေနဲ့ ဝေဖန်တာ၊ အပြုသဘောဆောင် ဆွေးနွေးကြတာ ကောင်းပါတယ်ဗျာ… ကိုဇူးကြီးနဲ့ ကိုဈာန်ထက်ရော နှစ်ယောက်လုံး မမှားကြပါဘူး… ကိုယ်မြင်တဲ့ဘက်က ကိုယ့်အမြင်ကို ကိုယ်ရေးကြတာပါ… ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း NGO တွေနဲ့ နီးစပ်ပါတယ်… တစ်ချို့က ၀ါသနာပါလို့ လုပ်တာရှိပါတယ်… သိရသသောက် အရေအတွက်အားဖြင့် နည်းပါတယ်… အများစုကတော့ လစာကောင်းလို့ လုပ်ကြတာပါ… ဒါပေမယ့် ကိုဇူးကြီးပြောသလို တကယ်လူကယ်ချင်တာတောင် အတိုင်းအတာ ဘောင်အတွင်းကပဲ လုပ်ခွင့်ရှိတာတွေလည်း မြင်ဘူးကြုံဘူးပါတယ်… ကိုဈာန်ထက် ပြောသလို အလွဲသုံးစားလုပ်နေကြတာလဲ မြင်ဘူးပါတယ်… (ကိုယ့်အမြင်နဲ့ ကိုယ်ပေါ့ဗျာ)၊ အစ်ကိုတို့တင်တဲ့ post တွေ comment တွေကို ဖတ်ပြီးတော့ ကျွန်တော်လည်း ပိုပြီး ဗဟုသုတ ရပါတယ်ဗျာ…
Mg Ogga says:
zanhtet ရဲ့ အမြင်ကိုထောက်ခံပါတယ် လူမှုရေးတကယ်လုပ်တဲ့သူရှိသလို့ လူမှုရေးလုပ်စားတဲ့ သူတွေလဲ ရှိပါတယ် INGO အချို့ ကွှဒြီလို အိမ်ငှားမှ ရမယ်ဆိုတာမျိုးတွေ ကို အကိုအနေနဲ့ တွေးမိပါသလား ဒီလို အဖွဲ့အစည်းတွေ အကြောင်း ဘယ်လောက်သိသလဲ ကောင်းတာရှိသလို ဆိုတာက နေရာတိုင်းမှာရှိတယ် INGO NGO မှမဟုတ်ဘူး ဘာသာရေး လို့ ဆိုတဲ့ အဖွဲ့တွေမှာတောင်ရှိတယ် ဒီအဖွဲ့တွေ မရှိတော့ ရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ လိုအပ်နေတဲ့ နေရာမှာ တစက်တစ်ပေါက် သူဘာသာသူအကျိုးရှိနေမှာပဲဗျ
အမှန်ပါတယ်ကောင်းတဲ့NGO ရှိသလို လုပ်စားနေတာတွေလဲရှိပါတယ် ။
The luxurious living expenses and hefty salaries for international and local staff of NGOs is usually the point many critics highlighting today. It is absolutely right thataconsiderable part of the donors’ fund goes to management budget whilealarge part of project fund goes unaccountable. However, the issue is who can be trusted to empower the management donors’ fund and project activities from the perspective of the donors who are foreign governments and global institutions. They cannot be told to leave the fund with the local staff. The reason may be political, managerial or both. One of the solution to this issue is to upgrade the quality of local staff in terms of education, expertise and experience. Local staff must have international or at least regional qualification in these areas for the donors and NGOs to delegate and empower the local staff more. The pay of INGO in Myanmar is great but that is much lower in relative to how much the same staff earns in Thailand. The reason is because of the different level of education and international exposure between two countries. Many experts unofficially say we should be happy ifaquarter of the entire funds actually reach out to the target population. Personally, I think this percentile is around ten percent because of mismanagement, theft, red tape bureaucracy and other wastes. We need to find out ways to capitalize these funds in stead of filing complaints because we don’t have any better source of incoming fund (assuming the country remains under the military regime). My advice is to go out of the country, educate and empower yourself and return to take over the management role in INGOs. (hoping you won’t forget the impoverished country after you are well equipped).